တိုက်ခန်း - #ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း_အရောင်း_အငှား Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: #ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း_အရောင်း_အငှား
#ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း_အရောင်း_အငှားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပါရစေ +++++++++++++++++++++++++++++++ 🏡 ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း 🏡 ချော်တွင်းကုန်း၊ အကျယ်အဝန်း (15´×55´) 🏡 3_Floor(H.K)၊ ပါကေးခင်း၊ 3-Air con. 🏡 1_Master Bedroom, 2_Bedroom. 🏡 ပြင်ဆင်ပြီး၊ နေရာကောင်း အခန်းကောင်း။ 💰 အရောင်း(စျေးနှုန်း)_၉၀၀သိန်း 💵 အငှား(စျေးနှုန်း)_၆သိန်း 📲📲📲📲📲 >>>>>>>>>>>> 09-752 7575 47, 09-7789 69 226 09-250 998 522, 09-340 185 131
အရွယ်အစား 875.00 စတုရန်းပေ
သန်လျင် ၊ Star City Condo
အရွယ်အစား 1328.00 စတုရန်းပေ